Beach Ememe Site Train Na Belgium | Save A Train
Home > Travel Europe > Beach Ememe Site Train Na Belgium
(Emelitere ikpeazụ On: 02/10/2020)
N'ihi na a obere mba, Belgium nwere ya mma òkè nke-atọ ụgbọ okporo ígwè njem na ọtụtụ a ebube n'anya ịhụ. The Belgium n'ụsọ oké osimiri bụ oké ụzọ iji zuru ike na-enwe anwụ na 65 kilomita nke n'ụsọ oké osimiri, na e nwere ọtụtụ na-akpali akpali seaside eme imeju. Were oge zuru ezu na enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè ị na-aga nke oke. Lee ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mma Beach ememe ụgbọ okporo ígwè na Belgium.
Ọ bụrụ n'ị na-achọ ụbọchị zuru oke iji gaa n'ụsọ osimiri, mgbe ahụ ebe a bụ ebe ị ga-eleta. Makwaara dị ka "City na Oké Osimiri", Ostend nwere n'elu 9 kilomita nke mara mma aja osimiri njikere maka sunbathing. E nwekwara a oké eme mkpagharị na a nso nke ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ ahịa, na ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'obodo. site 28 June ruo mgbe 31 August kwa afọ Ostend arụ usu na Aja ọkpụkpụ Festival nke bụ nza nke fun! naanị a obere ụgbọ okporo ígwè si Brussels, Ostend bụ zuru okè n'ihi na a beach-obodo ahụmahụ.
Brussels ka Ostend Ụgbọ oloko
Antwerp ka Ostend Ụgbọ oloko
Amsterdam na Ostend Ụgbọ oloko
Bruges ka Ostend Ụgbọ oloko
Ọ bụrụ na ị hop na a ụgbọ okporo ígwè na Brussels ị ga-ahụ onwe gị na Knokke-Heist gburugburu 50 nkeji mgbe e mesịrị. Ebe e nwere bụ naanị otu, ma 5 ọmarịcha osimiri na-eche gị. Nke a na mpaghara nwere ihe maka onye ọ bụla, tinyere a golf N'ezie, art veranda, a cha cha, ebe ọdịbendị na otu ọdịdị ala dị iche iche akpọ Zwin. Na ọtụtụ ihe na-eme nke a bụ a osimiri ezumike uru na-ewere.
Brussels ka Knokke-Heist Ụgbọ oloko
Antwerp ka Knokke-Heist Ụgbọ oloko
Amsterdam na Knokke-Heist Ụgbọ oloko
Bruges ka Knokke Ụgbọ oloko
N'ihi na ndị ọzọ adventurous, De Hann eme bụ oké nhọrọ. Naanị a obere ụgbọ okporo ígwè si Brussels, a seaside obodo awade a pụtara beachfront na anyanwụ oche na onwe ngalaba nke osimiri dị maka mgbazinye, yana maa mma Anglo-Norman style cottages na Villas. Ọ bụ ike mgbazinye anyịnya igwe na okirikiri n'okporo ụzọ ma ọ bụ na ala gbara osimiri okirikiri ụzọ na enwe mma na nnu ikuku. n'ihi na ihe n'èzí ahụmahụ, nke a bụ zuru okè n'ebe.
Ghent ka Ostend Ụgbọ oloko
Charleroi ka Ostend Ụgbọ oloko
Lille ka Ostend Ụgbọ oloko
Liège ka Ostend Ụgbọ oloko
Nke a nwere na-kacha beach-aga n'ebe Belgium maka ụfọdụ ezinụlọ fun. Maara nke ọma n'ihi na ya dịgasị iche iche nke mmiri egwuregwu dị ka paddling na igwu mmiri, ụgbọ mmiri njem, gara, azụ, efegharị efegharị carting na Farisii, nakwa dị ka ọtụtụ ntụrụndụ ụlọ ọrụ tinyere osimiri ma na a okporo ụzọ-free na-eme mkpagharị, Nieuwpoort awade ihe maka onye ọ bụla. Obodo a dị mfe ịnweta site na Brussels na a obere ụgbọ okporo ígwè ga-ị e.
Belgium nwere a ikpọ coastline na mfe nnweta ụgbọ oloko na-eme ka na-e niile ọzọ na-atọ ụtọ na nchegbu-free! E nwere a beach ebe ona onye ọ bụla mgbe nile na ihe ọhụrụ na-agbalị. Gịnị nwere ike ịbụ ihe obi ụtọ karịa otu n'ime ndị a osimiri ememe ụgbọ okporo ígwè na Belgium?
Ghent ka De Panne Ụgbọ oloko
Charleroi ka De Panne Ụgbọ oloko
Liège ka De Panne Ụgbọ oloko
Beach Ememe Site Train Na Belgium Summary
Gaa Saveatrain.com lelee niile anyị nanị ụgbọ oloko n'ego ụgbọ na-amalite na-eme atụmatụ gị ọzọ njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeach-holidays-by-train-in-belgium%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#beach ezumike njegharị